Fanavakavahana Atosiky Ny Resaka Foko No Hitan’ny Maro Ao Anatin’ilay Fandraràn’ny Ministera Ny Fampiasàna Ireo Fehitenda Masina Nafàrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2016 5:12 GMT
Vehivavy Tibetàna eo am-pamalonana khatag iray (khada) no sady miresaka ihany, reny sy zanany, mitàna emboka manitra, mala iray, moanina, Sakya Lamdre, Tharlam Courtyard, Nepal. Sary tao amin'ny Flickr an'i Wonderlane. CC BY 2.0
Raha niteraka hatezerana mafy nanerana izao tontolo izao ny ‘fandraràna bikini’ any amin'ny faritra maro ao Frantsa, niteraka fitroarana kosa teny anivon'ny vondrom-piarahamonin'ireo teratany ao amin'ny fireneny ny ministeran'ny fizahantany ao Nepal rehefa namoaka toromarika nandraràna ny fampiasàna ireo khada vita avy any ivelany, izay fehintenda heverina ho masina.
Ny Khada dia fehitenda masina fitondra aminà lanonana nentindrazana, manana ny fiaviany avy any Tibet, ary mariky ny fahadiovana sy ny fahatsorampo. Ampiasaina be izy io ao Nepal mba hanomezana voninahitra olona mandritra ireo fotoana sy lanonana miavaka, saingy manana ny fàkany avy amin'ny vondrom-piarahamonina Sherpa, vahoaka teratany avy any avaratr'i Nepal.
Tamin'ny faran'ny Aogositra, nambaran'ny Ministeran'ny Kolontsaina, Fizahantany ary ny Sidina Sivily ny fandraràna ireo birao rehetra ambany fiadidiany tsy hampiasa khada nafarana avy any ivelany. Nolazain'ny sekreteran'ilay ministera, Prem Kumar Rai, fa ‘rupees’ an-tapitrisa no lany amn'ny fanafàrana khada no sady miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana ilay izy.
Kanefa, taorian'ny horakoraka sy ny antsoantso naterany tao Nepal, nangataka ireo mpitàna birao ilay ministera mba tsy hampihatra ilay toromarika .
Mba hahatsapàna ilay tabataba, ilainao ny mahafantatra ny rafitra ara-tsaranga ao Nepal — ny antanan-tohatra nentin-drazana eo amin'ireo vondrona sosialy. Ny ‘Bahun’ na Brahmin no eny ambony indrindra, ary ny ankamaroan'ireo antoko politika dia saika Bahuns taholo no mitarika sy mitantana azy. Mitàna toerana ambony ao anatin'ilay antanan-tohatra ihany koa ny Khas. Ireo vondrona maro eo ambanin-dry zareo, isan'izany ny Sherpa, dia ara-tantara no efa nanilihìkilihana sy nanaovana azy ho anjorom-bàla. Avy amin'io fijery io, ny faneriterena nandidian'ny governemanta tarihan'ny Bahun maro an'isa momba ilay lamba masina ho an'ny Sherpa, raisin'ny maro ho toy ny fanaovana ratsy fitondra ny saranga napetraka ho ambany ao anatin'ilay antanan-tohatra.
Rabin Man Shakya nanoratra tao amin'ny bilaogy momba ilay fandraràna ny khada :
Androany, firenena tsy mivavaka i Nepal. Ity fangatahana tsy ampy fandinihana sy tsy manaraka làlan-tsaina momba ny fandraràna ny Khadas ity dia tsy natao na dia fony i Nepal mbola Fanjakana Hindu aza. Adinon'ireo antoko Bahunbadi sy ireo andry ianteherany fa firenena maro fiteny, maro kolontsaina ary maro foko i Nepal.
Raha avela malalaka hampiasa ny dhotis, janai, Teej sarees sy zavatra maro nafarana ireo vahoaka Bahuns sy Khas, nahoana no ho an'ny Khadas ihany no nasiana fandraràna? Mazava be ny tiana hahatongavana.
Ekeko tanteraka raha toa ilay fandraràna ka napetraka ho an'ireo vokatra rehetra tsy misy ilàna azy nafarana avy any ivelany, saingy mahatezitra sy tsy azo ekena ny fanaovana ho lasibatra samirery ny Khadas.
Lamba fotsy fitafin'ny lehilahy ny Dhoti; kofehy masina fitondran'ny Bahun sy ny Khas ny janai; Fety fankalazan'ireo vehivavy avy amin'ny vondrom-piarahamanonina Bahun sy Khas ny Teej; ary karazana fitafy fitondran'ireo vehivavy any Azia Atsimo ny saree na sari.
Nanoratra i @Tutulke ao amin'ny Twitter hoe:
Omaly: fanapahankevitry ny Ministera handràra ny fampiasana ny khadas nafarana.
Anio: Didin'ny ministera tsy hampiharana ilay fanapahankevitra. Voarora ny ministeran'ny governemanta.
Nobitsihan'i Dil Nisani Magar, mpanoratra miasa tena ny hoe:
Tsy misy na inona na inona mitranga rehefa voatsiroka, siramamy, vary, atody ary hena no afarana ho an'ny fanjifàna, fa ho an'ireo mpanavakavaka, ny fanafàrana khadas, fitaovana masina iray ho an'ny Bodisma, no mitondra fatiantoka.
Rehefa dinihana, tsy avelan'ireo mpanavakavaka hotafiana ny khadas. Zava-masina ho an'ny vondrom-piarahamonina Sherpa ny Khada, toy ny basilic ho an'ny Brahmin.
Nanoratra ny iray hafa mpampiasa Twitter :
Ho toy ny inona no ho tsapan'ny Hindoa raha raràna tsy hanisy tika eny amin'ny handrina? Mitovy amin'ny fandraràna ny khadas izany aminay. Manaraka ao anaty lisitry ny fandraràna: Momo sy Thukpa!!!
Ny Momo dia bolabolan-kena ary ny Thukpa dia lasopy ao Nepal.
Maneho ny heviny ny sasany amin'ny filazàna fa misy tsy fahatakaran'ny olona ilay fanapahankevitra :
Tsy misy FANDRARANA ny fanafarana ny Khada. Namoaka didy ho an'ireo birao ambany fiadidiany ny Min Fizahantany mba tsy hampiasa Khada vita avy any ivelany
Raha ny hafa indray nanohana ilay toromariky ny ministera mandidy ny tsy hampiasàna khadas nafarana:
Nandre fa hoe nomena ny toromarika tsy hampiasàna ny khadas izay tsy ho azo averina ampiasaina rehefa avy nanaovana voalohany no sady mandoto ny tontolo iainana rehefa potehana. Faly aho.
Araka ilay mpanoratra, Aahuti, maro no tsy nahalàla momba ny khada, am-polo taona maro lasa izay. Taorian'ny Fitroarana Maoista nifarana tamin'ny 2006 sy ireo dingana ho amin'ny fandriampahalemana nanomboka tao Nepal, nitombo ny fampiasàna ny khada. Tsy sarotra itafiana ny Khada, mora vidy, mora hita ary afaka ampiasaina ho solon'ny vàkam-boninkazo. Noho io, nanomboka nampiasa azy ireo vondrom-piarahamanonina ao ambadiky ny Sherpa.
Saingy mbola mijanona ho zava-tsarobidin'ny vondrom-piarahamonina Sherpa ihany izy, ary tsy vitavita mora ny fahadisoana amin'ny fampiasàna ny khada. Tany ampiandohan'ity taona ity, ilay Nepaley mpilaao sarimihetsika, Suvekshya Thapa, nitafy khadas toy ny fitafy bikini ary dia nandrehitra ny hatezeran'ny vondrom-piarahamonina Sherpa. Noahiahian'ny Fikambanan'ireo Mpanakanto Mpilalao Sarimihetsika ao Nepal izy hoe tafiditra amin'ireo hetsika mifandray amin'ny fanaovana ilay sarimihetsika nanohintohina ny fihetsehampon'ireo Bodista nandritry ny enim-bolona.
Lamba Dhaka tenomina tànana ao Nepal. Sary tao amin'ny Flickr an'ny Oxlaey.com . CC BY 2.0
Tena nalahelo tokoa ireo vondrom-piarahamonina teratany noho ilay toromarika, na dia ny khadas vita avy any ivelany ihany aza no noresahan'ilay izy. Tsy niditra nanaraka ny torohevitry ny governemanta ny amin'ny hividianana sy hampiasàna ireo khadas antsoina hoe dhaka vita tànana ao Nepal ihany koa ry zareo :
नाईटो ढाक्ने पछयौरी र मुख चुटेर हात पुछ्ने गलबन्दीलाई पबित्र “खादा” को उपनाम दिने गल्ती नगरौं । 🙂
Aleo isika tsy hanao hadisoana ka hanome ny fahamasinan'ny ‘khadas’ ho anà lambakely fandrakofana foitra sy famaohana tànana rehefa avy manasa tarehy.
Ao Nepal, mitondra lamba famaohana ireo olona any ambanivohitra, mazàna vita amin'ny dhaka, ahantony eny an-tenda mba hamafàna sy ho azony ampiasaina hanamainana ny tànana rehefa avy nosasàna.
Na namoaka didy hampiatoana ilay toromarika aza ny ministera, mitohy ny adihevitra.
Tsy Nepaley ny Khada. Ahilio avy hatrany. Toy izany koa, ny momo, ny ovy, ny katsaka, ny telomiova, ny pataloha jeans, ny dhaka, esory any koa izy rehetra ireny.